Shiinaha Silver ion warshad xalka dhameystirka bakteeriyada iyo saarayaasha | Langyi
AntibacMax®Xalka dhammeystirka lidka bakteeriyada L1000 waa shey xalka xasilloonida bakteeriyada kujira oo ion lacag ah si siman ugu dhex firdhisan polymer qaas ah tiknoolajiyada nano-firidhida gaarka ah.
Dareeraha L1000 ee ka hortaga bakteeriyada ka soo baxda dusha sare ee dharka ayaa si tartiib ah u sii deyn doona ion lacag kadib qalajinta iyo taabashada bakteeriyada, fungi iyo microbes kale, kuwaas oo si toos ah u baabiin kara xuubka unugyada bakteeriyada isla markaana ku dari kara oksijiinka dheef-shiid kiimikaadka (SH), ka hortagga bakteeriyada iyo jeermisyada kale. ka nuugista nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah koritaanka sida amino acid, uracil, taas oo ka hortageysa ama u baabi'inaysa inta badan bakteeriyada, fungi iyo microbes kale, isla mar ahaantaana sidoo kale waxay leeyihiin ka hortag wanaagsan dhammaan noocyada borotiinka capsid virus.
Xalka dhammeystirka lidka bakteeriyada ee L1000 wuxuu si joogto ah u siiyaa ion lacag antibacterial ion ah dharka iyadoo la xakameynayo xaddiga ion qalin ee lagu sii daayay polymer-ka, taasoo ka dhigeysa in jeermiska antibacterial uu sii dheeraado.
Ma jiro iska caabin daroogo; ma laha ur
Cudurka 'Escherichia coli', 'staphylococcus aureus', 'Candida albicans', 'pneumococcus', 'pseudomonas aeruginosa' iyo wixii la mid ah ayaa leh saameyn fiican oo bakteeriya ah
Tiknoolajiyada sii deynta ee loo yaqaan 'Silver ion control' waxay siisaa walxo firfircoon oo lidka ku ah bakteeriyada
Resistance U adkeysiga kuleylka wanaagsan
Xasiloonida kuleylka wanaagsan, ka shaqeynta ma fududa in la beddelo midabka
Ulation Samaynta xal cusub
Nidaamka xalka waa mid xasiloon oo isku mid ah; Dareen wanaagsan oo nadaafad ah; La jaan qaadi kara waxyaabo kala duwan oo ah fiber iyo waxyaabo lagu daro;
polymer dabiici ah
Cajiin khafiif ah ama amber
Fibrada dharka, lagu daro aan tolmo wanaagsan lahayn
Ku habboon dharka caaga, sida nylon (PA), polyester (PET), iwm, iyo caag isku qasan polyester.
Waxaa lagu qasi karaa noocyo kala duwan oo ah wakiillada dhammeynta dharka iyo waxyaabo aan dhejis lahayn. Dharka (dharka hoose, sharaabaadyada, shaatiyada, jaakadaha, dharka caafimaadka, dharka, dharka shaqada, iwm.), Gogosha (go'yaal, gogosha, iwm.), Maaskarada, Gacmo gashi, Dharka dharka, Koofiyadaha, Marooyinka, Shukumaanada, Ragga, Daahyada, Roogagga, iwm
Hore: Antibacterial maro aan goyn
Xiga: Xalka qalinka oo hufan
Xalka dhammeystirka bakteeriyada Silver Ion
Yarn bakteeriyada, Maqaarka Antiwo Bakteeriyada Aan Laheyn, Masterbatch antibacterial, Wakiilka Polymeric Antihydrolysis, Bakteeriyada bakteeriyada dhalaalaysa-Blown Masterbatch, Antibacterial Electret Masterbatch,